साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म रू ३१ करोड ३७ लाख मूल्यको जडीबुटी निकासी - Arthapage
साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म रू ३१ करोड ३७ लाख मूल्यको जडीबुटी निकासी
प्रकाशित मितिः १३ पुष २०७७, सोमबार १७:०२ December 28, 2020
भारततर्फ जडीबुटीको निर्यात करीब ६ गुणाले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा भारततर्फ रू. ३१ करोड ३७ लाख मूल्य बराबरको जडीबुटी निकासी भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिका तुलनामा ५९१ प्रतिशत धेरै हो।
यद्यपी, व्यवसायीहरूले भने भारतबाट जडीबुटीको माग बढेको नभई बन्दाबन्दीमा रोकिएको निर्यात एकै पटक हुँदा निर्यात बढेको देखिएको बताएका छन्। नेपाल जडीबुटी संघका अध्यक्ष याकुब अन्सारीले रोकिएको निर्यात साउन यता हुन थालेसँगै आकार बढेको देखिएको बताए। नेपालबाट टिमुर, रिठ्ठा, पदम्चाल, चुत्रो, चिराइतो लगायतका जडीबुटी निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालबाट अप्रशोधित जडीबुटी निर्यात हुने कारण नेपालले मूल्यको लाभ लिन नसकेको भनी टिप्पणी हुँदै आएको छ।
भारततर्फको जडीबुटी निर्यात बढेपनि तेस्रो मुलुकहरू तर्फको निर्यात भने ४१ प्रतिशत खस्किएको छ। कात्तिकसम्ममा रू. ११ करोड ४२ लाखको मात्र जडीबुटी निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रू. १९ करोड ३२ लाखको निर्यात भएको थियो।
भन्सार विभागको अर्को तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीना (साउन–मंसीर मसान्त)मा रू. ५४ करोड ४० लाख मूल्य बराबरका जडीबुटीको निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा रू। २९ करोड १७ लाखमा सीमित थियो।
तर, यो वर्ष यार्सागुम्बाको निर्यात भने घटेको छ। साउन–मंसीरमा रू. ९ करोड ३१ लाखको मात्र यार्सागुम्बा निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रू. १४ करोड ७५ लाखको निर्यात भएको थियो। यो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण यार्सागुम्बा संकलनमा व्यवधान आएको थियो।
प्रकाशित मितिः १३ पुष २०७७, सोमबार १७:०२ |
Prevजमुनाह लगायत सबै नाकाबाट ‘थोरै’ उपभोग्य सामाग्री ल्याउँदा समेत भन्सार लाग्ने
Nextजुर्मुरायो काँग्रेस : बाँकेमा यस्तो देखियो प्रदर्शन (फोटो फिचर सहित)